120W Sistem Ọdịdị Siri Ike Igwe Ngwá Ọrụ nke 120W China Emeputa
Nkọwa:Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ahịa Siri Ike nke Ọma 120W Polycrystalline,Ngwá Ọrụ Ngwá Ahịa nke Ahịa Polycrystalline Customizable,Polycrystalline Silicon Solar Panels
Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ahịa Siri Ike nke Ọma 120W Polycrystalline,Ngwá Ọrụ Ngwá Ahịa nke Ahịa Polycrystalline Customizable,Polycrystalline Silicon Solar Panels
Home > Ngwaahịa > Ngwa igwe na panel > Polycrystalline Solar Panels > 120W Sistem Ọdịdị Siri Ike Igwe Ngwá Ọrụ nke 120W
Ubu oke: 60000PCS/DAY
Usoro HS: 8541402000
Ngwurugwu nke polysilicon nke a na-ahụkarị bụ nke ọgbọ ọhụrụ nke batrị na uru nke nsụgharị akụrụngwa dị elu na ogologo ndụ nke mkpụrụ ndụ mkpụrụedemede monocrystalline, yana usoro nkwadebe ihe onwunwe nke batrị ihe nkiri na-emepụta ihe ndị dị na silicon thin na simplification ikwu.
1. Igwe: Igwe na-acha ọcha nke na-acha ọcha na-acha odo odo, ọkpụkpụ 3.2 mm, na nzaghachi ntụgharị nke ntụgharị wavelarngth (320-1100 nm) transmittance ruo 91%, nkwụsị nke UV, transmittance anaghị ada. Ihe ndị mejupụtara iko mmiri nwere ike ime ka mmetụta nke dayameta nke hockey ice ice 25 nwee ike ịdị na 23 m / s.
2. EVA: A na-eji ihe ntanye nke 0,5 na-eme ihe dị ka onye na-emechi akara nke mkpụrụ ndụ anyanwụ na njikọ dị n'etiti fim EVA na iko na TPT. Ọ nwere ikike transmittance na ike ịka nká. Ihe ndi choro nke ihe akuku EVA maka ihe nlekota nke ndi di iche iche na nyocha di iche iche bu ihe ndi ozo: transmittance kariri 90%; akara nrịta nke kariri 65-85%; ume ike (N / cm), iko / ihe nkiri karịrị 30%; TPT / ihe nkiri karịrị 15%; nkwụsị okpomọkụ: oke okpomọkụ 85, obere okpomọkụ - 40.
3TPT: azụ azụ nke ụbụrụ, mgbochi ịka nká, mgbochi mmechi, mgbochi ultraviolet radieshon, ikuku ikuku na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
4. etiti: aluminom alloy frame nwere ike dị ukwuu na ike ike usoro.
5. iko iko nke nwere ike ịme onwe gị ọcha ma belata ihe gbasara nke puru ibu nke uzuzu ugbo na-emetụta ike ya.
Ngwaahịa : Ngwa igwe na panel > Polycrystalline Solar Panels
Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ahịa Siri Ike nke Ọma 120W Polycrystalline
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Dị Mkpụrụ Igwe
Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ Ike anyanwụ
20N Ngwá Ọrụ Ike Mpụga n&#39;èzí
Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Dị Mkpa